चर्चित र सफल बन्न कति गाह्रो छ, यो समाचार बढ्नुस् अनि बुझ्नुहोस्…… .::Nepal's Online News Portal
चर्चित र सफल बन्न कति गाह्रो छ, यो समाचार बढ्नुस् अनि बुझ्नुहोस्…… .
असोज ११/ निन्द्रा यस्तो चीज हो जसको अगाडि मानिसको वश चल्दैन। आनन्दको निन्द्रा अगाडि जनावरदेखि मानिसको पनि केही वश चल्दैन। दिमागलाई स्वस्थ राख्न कम्तिमा पनि आठ घण्टा सुत्नु आवश्यक हुन्छ। आज हामी तपाइँलाई त्यस्ता व्यक्तिका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं जो हामीभन्दा धेरै व्यस्त हुन्छन्। उनीहरुको कामको लिस्ट पनि निकै लामो हुनेगर्छ। यस्तोमा उनीहरु आफ्नो शरीर र दिमागलाई स्वस्थ राख्न कतिघण्टा सुत्छन् भन्ने विषयमा हामी जानकारी दिन गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बारेमा जसमाथि पूरै देशको जिम्मेवारी छ। अफिशियल काम–काज बैठक र्याली, विदेश भ्रमण अर्थात विहानदेखि अबेर रातिसम्म व्यस्त रहने प्रधानमन्त्री मोदी अहिलेसम्म फिट छन्। तपाइँ अचम्ममा पर्नसक्नुहुन्छ उनी मात्र ४–५ घण्टामात्र सुत्छन्।बलिउडका बादशाह शाहरुख खानको पहिचान देश विदेशसम्म छ। शुटिङ, लाइभ इभेन्ट्स, मिटिङ, पत्रकार सम्मेलन आदि काममा व्यस्त हुने किङ खानलाई सुत्ने समय किनै कम मात्र हुन्छ। शाहरुख खान मात्र ३–४ घण्टासम्म मात्र सुत्छन्।
भारतीय मुलकी इन्दिरा नुई विश्वका सबैभन्दा प्रभावशाली महिलामध्ये एक हुन्। २००७ मा उद्योग तथा व्यापारको क्षेत्रमा अभूतपूर्व कामकालागि उनलाई भारत सरकारले पद्मभुषणबाट सम्मान गरेको थियो। आफ्नो सफलताबाट सबैलाई चकित पारेकी पेप्सीकोकी अध्यक्ष सीईओ इन्दिरा केवल चार घण्टामात्रै सुत्छिन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उमेर ७० वर्ष भयो। ७० वर्षको उमेरमा पनि आफूलाई फिट राख्ने ट्रम्प दैनिक ३–४ घण्टामात्रै सुत्छन्। र यसैलाई उनी आफ्नो सफलताको राज मान्छन्। चर्चित पत्रिकामा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार आफ्नो सफलाताकालागि उनी यसलाई महत्वपूर्ण मान्छन्। उनी आफ्नो काममा यतिधेरै व्यस्त हुन्छन् जसका कारण उनलाई सत्ने प्रयाप्त समय हुँदैन।
सामाजिक संजाल ट्वीटरका सीईओ तथा स्क्वायरका पाउण्डर एवं सीईओ ज्याक डार्सी यतिबेला व्यापार सम्हाल्न निकै मेहनत गरिरहेका छन्। दुई वटै व्यापारलाई दैनिक८–१० घण्टा समय दिनुपर्छ। यस्तामा उनलाई सत्नकालागि समय निकाल्न निकै समस्या हुने गरेको छ।
तपाइँ अचम्ममा पर्न सकनुहुन्छ, एप्पलका सीईओ टिम कुक विहान पौने चार बजे उड्छन्। उनी सुत्ने बेलामा विहान ३ नै बजेको रहेछ भने पनि उनी उठ्ने समय भनेको पौने चार नै हो।